Musharaxa Madaxwaynaha Somaliya Ee Dhuxulow Oo Lagu Xiray Hargeysa. – Heemaal News Network
Wararka ka imanaya magaalada Hargeysa ee caasimada Somaliland ayaa sheegaya in lagu xiray Musharax Madaxweynaha Soomaaliya, Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow oo sidoo kale ah mudane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Khaalid Foodhadhi oo kamid ah wariyeyaasha ugu caansan Somaliland, ayaa sheegay in Mustaf Dhuxulow lagu xiray madaarka magaalad Hargeysa ee Cigaal.
Dhuxulow ayaa lagu soo waramayaa inuu ku xiran yahay saldhig ku yaala garoonka diyaaradaha ee Hargeysa, kaasi loo taxaabay kadib markii ciidamada booliska ay ka qabteen madaarka, xili uu kasoo dagay diyaarad soo cago dhigatay garoonka.
Safarka Hargeysa ee Musharax Madaxweynaha Soomaaliya, Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow ayaa aheyn mid hore loo sii shaaciyey, lamana oga ila hadda inuu yahay mid uu u qasdiyay iyo ujeedka ka dambeeya safarkaasi.
Inkasta oo ilaa hadda si dhab ah loo ogeyn sababta xariga Dhuxulow ayaa haddana waxa soo baxaya warar kale oo sheegaya in uu Transit ku ahaa garoonka Hargeysa, isla markaana uu kasoo degtay diyaaradii uu saarna mudadii ay ku sugneyd madaarka.
Ilaa hadda ma jiro wax war ah oo kasoo baxay laamaha amiga iyo maamulka Madaarka oo ku aadan xariga Dhuxulow, oo saacadii u dambeysay si weyn looga hadal hayay baraha bulshada.
Ardayda Dufcadii 13aad Oo Maanta ka Qalinjabisay Collegeka Waaberi Ee Borama.